Lozam-pifamoivoizana sesilany RN5, RN7, RN13: olona efatra namoy ny ainy, maro ireo naratra | NewsMada
Par Taratra sur 22/06/2021
Nanao tohivakana… Lozam-pifamoivoizana efatra indray nitranga ny faran’ny herinandro teo teny amin’ny lalam-pirenena faha-7 sy faha-5. Olona efatra namoy ny ainy. Ankoatra ireo ankizikely maromaro, tsy latsaky ny 10 ireo naratra.
Fiara taksiborosy iray mampitohy ny Renivohitra sy i Fandriana no tra-doza, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 12 ora sy sasany, teo Antemotra, avaratr’Ilempona, kaominina Antanifotsy. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, olona miisa roa ny namoy ny ainy, ankizikely ny iray amin’izany. « Mbola nijanona nisakafo tao Ambohimandroso izahay talohan’ny tranga, tsy hita anefa ny mpamily ny fiara tamin’io fotoana io fa nandeha nisotrosotro », hoy ny tatitra voarain’ny Polisy ao an-toerana misahana ny fanadihadiana. Rehefa nanohy ny dia anefa, nirimorimo ny fiara. Niala ireo mpianatra teny amin’ny lalana handeha hody anefa ka nivadibadika tafavoaka ny arabe. Vokany, maty tsy tra-drano tamin’izany ny lehilahy iray mpandeha, 55 taona. « Vaky tanteraka ny lohany ka antony nahafaty azy teo no ho eo », hoy ny fanazavan’ny Polisy. Nambarany fa nahatratra 20 ireo naratra sy nalefa vonjimaika tao amin’ny hopitaly ao an-toerana. Isan’izany ihany koa ilay zazakely iray namoy ny ainy raha vao tonga tao amin’ny toeram-pitsaboana raha mbola tsy mahatsiaro tena kosa ny reniny. Ankizikely miisa efatra tao anatin’ny fiara naratra ka voatery nalefa any amin’ny hopitalin’Antsirabe. Voasambotra ilay mpamily tsy naratra ary tazonina vonjimaika ao amin’ny kaomisarian’Antanifotsy hanaovana fanadihadiana.
Nahafatesana olona ihany koa tany amin’ny faritra Ihorombe
Ny tolakandron’ny 20 jona 2020 teo koa, nisy lozam-pifamoivoizana teo anelanelan’i Betroka sy Ihosy. Voalaza fa mpiasan’ny Fahasalamana avy namita iraka tany amin’iny faritra atsimon’ny Nosy iny ireto tra-doza tampoka ireto ka namoizana ain’olona iray sy naharatrana mpiasan’ny minisiteran’ny Fahalasamana miisa efatra, ao anatin’izany ny mpamily ilay fiara 4×4. Araka ny vaovao voaray, efa afaka namonjy ny fodiany ireo telo naratra tamin’ity fiara tsy mataho-dalana ity raha mbola tsaboina ao an-toerana kosa ny olona iray hafa.
Nieren-doza ny Pr Ratsimbazafy Jonah
Nitrangana lozam-pifamoivoizana ihany koa tao Begoaika Soavina, atsimon’Antsirabe, lalam-pirenena faha-7 iny. Tra-doza tamin’izany ny Pr Ratsimbazafy Jonah sy ny mpamiliny, afakomaly hariva. Tsy nisy ny aina nafoy saingy potika ny fiara. « Raha ny fahitana ny fiafaran’ny fiara, mafy dia mafy ny dona nahazo azy… », hoy ny fanazavan’ny Pr Jonah tao amin’ny kaonty « facebook »-ny.
Teny amin’ny lalam-pirenena faha-5
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina ihany koa teny amin’ny lalam-pirenena faha-5 mampitohy an’Antalaha sy i Sambava; ny alahady antoandro teo tokony ho tamin’ny 2 ora sy 50 minitra. Nifandona tamin’izany ny moto roa, teo Ambatofasika, 3 km tsy hidirana an’Antalaha. Maty tsy tra-drano tamin’izany ny renim-pianakaviana iray 37 taona manan-janaka roa nanao taingin-droa tamin’ny moto niaraka amin’ny vadiny. Nifandona mafy tamina moto iray hafa nanao taingin-droa izy ireo ka samy naratra ireo mpandeha miisa telo izay samy nalefa avokoa eny amin’ny hopitaly.